ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “မြို့မေတ္တာ ခံယူတဲ့ သားပေမို့”
I love the way you write this article. Thanks.
ပျဉ်းမနားက မင်းတြားကြီးရဲ့ သတင်းစကားကို ခြင်းကြားကနေ လာဖတ်ရင်း စဉ်းစားသွားပါတယ်ခင်ည။ တင်းထားကြ ကိုယ့်လူတို့။ အချင်းမများကြလေနဲ့။ အပျင်းလည်းမပွားကြလေနဲ့။ ဟင်းစားကိုလည်း မမက်နဲ့။ နင်းသွားမယ်နော။
အော် ကိုပေါ ကိုပေါနဲ့ ဒါ့ကြောင့်လဲ နာမည်ကြီးသကိုး..
ဒင်း ရင်ထဲ ဟက်တက်ကွဲအောင်..
This is very good. thanks for your hands and mind @ eye!!!!!